Wararka - Ma ogtahay shaqooyinka waaweyn ee shaashadda birta
Shaashadda biraha waxay leedahay afar hawlood oo soo socda:
Baadhitaanka: waxaa inta badan loo adeegsadaa walxaha adag, budada iyo baadhista macdanta birta, dhuxusha, caagga, batroolka, warshadaha kiimikada, farmashiyaha, baabuurta, dhoobada, dhalada iyo warshadaha kale.
Ilaalinta: waxaa inta badan loo adeegsadaa dhismaha madaniga ah, dufcad sibidh ah, dhaqashada digaagga, shinbiraha, shinbiraha, bakaylaha iyo dayrarka xayawaanka. Ilaalinta qalabka makaanikada, dariiqa waardiyaha, xayndaabka garoonka, shabakada ilaalinta suunka cagaaran ee wadada.
Sifaynta: waxaa inta badan loo isticmaalaa shaashadda dhoobada ee warshadaha batroolka, shaashadda pickling ee warshadaha korontada fiilada kiimikada iyo sifeynta gaaska dareeraha iyo nadiifinta.
Hagaajinta: waxaa loo isticmaali karaa xoojinta iyo taageerada qalfoofka ee warshadaha dhismaha, waddada weyn iyo buundada.
Miyaad fahantay afarta hawlood ee shaashadda birta? Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato shaashadda birta, fadlan booqo degelkeenna
Waxaan wada ognahay in shaashadu leedahay codsiyo aad u kala duwan, sidoo kale waxay door ka ciyaari kartaa daaweynta bullaacadaha. Haddaba, doorkee ayuu shaashadu ka ciyaari karaa habka daaweynta bullaacadaha? Marka xigta, Xiaobian ayaa soo bandhigi doonta
Doorka shaashadda ee daaweynta bullaacadaha.
Shaashadu waa qaybta daaweynta ee warshadda wasakhda bullaacadaha, taas oo inta badan ku taal hor -dhisme kasta oo daaweyn ah oo ka mid ah warshadda daweynta (sump station sump, grit room, haanta qashin -qubka iyo dhammaadka gelitaanka biyaha). Shaqadooda ugu weyni waa inay ka saaraan walxaha adag ee biyaha, waxay ilaaliyaan qalabka farsamada ee warshadda daaweynta (gaar ahaan bamgareynta) waxayna ka hortagtaa xannibaadda qabow ee dhuumaha.